Hery Rajaonarimampianina : Nampiseho fitiavan-tanindrazana tokoa -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Nampiseho fitiavan-tanindrazana tokoa
05/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampandefitra ny hambom-po politikany ny Filoham-pirenena ankehitriny, ary nampiseho ny fitiavan-tanindrazana marina tamin’ ny alalan’ ny fanekena sy fitadiavana marimaritra iraisaina ahafahan’ ny firenena mivoaka amin’ izao olana izao. Porofon’ izany ny fanekena sy ny fanarahany ny fanapahana izay navoakan’ ny HCC, ka nanekeny sy nandraisany ny fametraham-pialan’ny praiministra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ity farany ihany koa izay nilaza ampahibemaso fa noho ny tombontsoa ambonin’ ny firenena no anton’ ny fametraham-pialany ahafahan’ ny filoha misafidy malalaka izay ho praiminisitra hifanarahan’ ny rehetra. Noho izany dia nampiseho tokoa ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa olona tsy tia tena izy, ary ambony noho ny rehetra ny fitiavan-tanindrazana. Nambaran’ ny Filoham-pirenena mantsy omaly hariva fa “ noho ny tombontsoa ambonin’ ny firenena dia nampandeferina ny hambom-po, ary nirosoana ny fifampidinihana hitadiavana marimaritra iraisana ho tombontsoa ambonin’ ny firenena, satria tokoa dia efa nambarako fa fifidianana hisian’ ny fifandimbiasam-pahefana no ilaina, ary fifidianana ahafahan’ ny rehetra mirotsaka tsy misy ankanavaka sy eken’ny rehetra no ilaina eto amin’ ny firenena” hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Manoloana ny hetsika fanakorontanana amin’ izao fotoana izao tokoa izany dia voaporofo izao fa vitsy ny olona manana seza sahy miroso amin’ny fanapahan-kevitra tahaka izao, satria na dia ny fahavalo eny andalam-be izay mikendry ny hanala azy tamin’ ny toerany aza dia nekeny ny nihaonana taminy. Firifiry tokoa moa ireo mpitondra teto amin’ ny firenena no nampiseho fihetsika tahaka izao ataon’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina izao, satria raha ny tantara tany aloha no jerena dia saika misy rà latsaka hatrany vao manaiky ny fandaminana politika ireo mpitondra tany aloha ireo. Noho izany dia Filoha tahaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ilaina sy mendrika no hitondra ny firenena , izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoan’ ny vahoaka malagasy. Raha tsiahivina ihany koa dia feno fanetren-tena ny filoha ankehitriny nandritra izay fotoana nitondrany ny firenena izay, satria nandritra ny kabary izay nataony dia niaiky hatrany ny tenany fa nisy ny asa efa vita saingy mbola maro no miandry. Ny tenany aza izay nanaiky tokoa fa ny asa fototra fanorenana izay notanterahina ny fanekana fa mbola tsy tonga any ambilanin’ny isam-batan’olona , saingy miroso amin’ izany tanteraka kosa ny asa ankehitriny. Tsiahivina raha teo ny fiakaran’ ny harin-karena faobe nandritra ny fitondran’ ny Filoham-pirenena ankehitriny, izay nahitana fiakarany any amin’ ny 4,1% ny taona 2017, ary amin’ ity taona ity raha ny vinavina dia ahatratra 5,2% izany. Voaporofo noho ireo antontan’isa ireo noho izany fa tsy mitsahatra mihatsara ny fiainam-pirenena ara-toekarena nandritra ny fitondran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina